Puri Rath Yatra 2018 အထုပ်များ | Call: + 91-993.702.7574
သငျသညျဟိန္ဒူဘာသာ၏စစ်မှန်သောနောက်လိုက်ဖြစ်ပါသလား သင့်ရဲ့တစ်သက်တာအတွက်သွားရောက်ခြင်းတန်ဖိုးရှိတစ်ဦးဘာသာရေးအရပျကိုရှာဖွေနေ, add ကြပါ Puri Rath Yatra 2018 သင့်ရဲ့စာရင်းထဲမှာပါ! ကောင်းပြီ, Puri Rath Yatra အမှန်တသက်တာမှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်ချီးမြှောက်ခဲ့ခံရဖို့တစ်ခုခုပါပဲ။
နတ်ဘုရားဝဠာဖို့တညီတညှတျတညျး၏သတင်းစကားကိုပေးပို့ဖို့ဇာတ်, ဘာသာရေး, & အယူဝါဒ၏အတားအဆီးကိုဖဲ့ဗိမာန်တော်ထဲကလမ်းလျှောက်အဘယ်မှာရှိကမ္ဘာဂြိုဟ် Rath Yatra ပေါ်တွင်အကြီးမားဆုံးပွဲတော်သက်သေခံ။ အဆိုပါ Puri-အနှစ်သာရသည်ကြီးမားရထားများ, အစိုစွတ်သောလေထုရုတ်တရက်မိုးရှာနှင့်အတူ clubbed နှင့် cacophonous din ဖြစ်ရပ်တစ်ခုင်း၏ကြင်ကြင်နာနာများထဲမှအိန္ဒိယအတွက်အမြတ်ဆုံးပွဲတော်, Rath Yatra 2018 ပါစေ။
အဆိုပါကမ္ဘာကျော် Rath Yatra ကြီးကျယ်ခမ်းနား, ဘာသာရေးစိတ်ဓာတ်ပြင်းထန်ခြင်းနှင့်ချစ်ခင်ရင်းနှီးမှု၏တစ်ဦးစိတ်ဝိညာဉ်နှင့်အတူကျင်းပခဲ့သည်။ မိုဃ်းကောင်းကင်အခါသမယကျေးဇူးတော်သည်မြေကြီးပေါ်မှာလဲများကဲ့သို့လင်းကွင်း, ဗုံနှင့်တေးဂီတ၏လက်ရာမြောက်သောသံကိုခံစားရ၏။ သငျသညျကောငျးကငျဘုံရန်သင့်ကျမ်းပိုဒ်ရရှိမည် - ဒါဟာသင်တစ်ကြိမ်သာရထားဆွဲလျှင်ယုံကြည်ကြသည်။ နှင့်အညီ, ကမ္ဘာဂြိုဟ်မှာရှိတဲ့အဘယ်သူမျှမလွဲချော်ချင်ပါတယ် Puri Rath Yatra 2018!
Puri Rath Yatra 2018 အထုပ်များ
SandPebbles များအတွက်အံ့သြဖွယ် packages များကမ်းလှမ်း Puri Rath Yatra ခရီးစဉ်သငျသညျထိုမွို့၏အရှိဆုံးအလုပ်အများဆုံးနာရီအတွင်းတစ်ဦးလုပ်ရတဲ့-အခမဲ့ခရီးနှင့်နေရာထိုင်ခင်းများရှိနိုင်ပါသည်ဒါကြောင့်။ သငျသညျ Bhubaneswar ကနေခရီးသွားလာခြင်းသို့မဟုတ် Puri Rath Yatra စဉ်အတွင်းမွို့၌နေရန်လိုခငျြဖွစျစေ, ကျနော်တို့အခုကတည်းက Booking တွေကိုအားလုံးအစီအစဉ်များ, ခရီးစဉ်စီး & အားလုံး, သင့်ဘုရားသခငျ့ခရီးအမှတ်တရဖြစ်စေရန်ပါစေ။ ကျွန်တော်တို့၏ Puri Rath Yatra 2018 အထုပ်ပါဝင်သည်:
နေ့ 1: Arrival Bhubaneswar
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်စားလှယ်များတစ်ခုမှာ Biju Patnaik အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလေဆိပ်, Bhubaneswar မှာသင်ရရှိနှင့်ဟိုတယ်ရန်သင့်အားခေါ်ထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ လေယာဉ်နံနက်ယံ၌ရောက်ရှိနေလျှင်, သင်စမတ်စီးတီးသွားရောက်ကြည့်ရှုနိုင်သည်သို့မဟုတ် Puri များအတွက်ထွက်ခွာနိုင်ရုံ 60 ကီလိုမီတာမြို့မှကားမောင်း။ ညစာဟိုတယ်များတွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပါလိမ့်မည်။
နေ့ 2: အလည်တစ်ခေါက် Jagannath ဘုရားကျောင်း
Dhauli မှ Puri en-လမ်းကြောင်းခရီးစဉ်ကို (Ashokan ရော့ခ်အမိန့်များနှင့် Shanti ပုထိုးတော်ကြီး) အားနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ, Pipili (ပန်းကပ်ပုံဖော်ခြင်းလုပ်ငန်းကျေးရွာ), Sakshigopal (Radha Krishna ဟိန္ဒူဘုရားကျောင်း) & Raghurajpur / Naikpatna (ကျေးရွာပန်းချီ) ။ Puri မှာရောက်ရှိနေတဲ့ဟိုတယ်အတွက် Check ။ တိုက်ရိုက် Aalati Darshan များတွင်ပါမှသခင်ဘုရား Jagannath ဗိမာနျတျောမှညနပေိုငျးအလည်အပတ်ခရီး (non-ဟိန္ဒူဗိမာနျတျောအတှငျးအခွင့်ပြုခဲ့ကြသည်မဟုတ်) ။ သငျသညျ Puri ဗိမာနျတျောသို့သွားရောက်တစ်ချိန်ကသင်, "Moksha အဘိဓါန်" (ကယျတငျတျောမူခွငျး) အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ "ချာလိတ် Dham" သွားရောက်ကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ပါဘူး။ နောက်ကျောဟိုတယ်အခန်း။
နေ့ 3: Rath Yatra
အဆိုပါ Puri Badadanda မှနံနက်စာ drive ကိုပွီးနောကျ။ အထူးအစီအစဉ် Rath Yatra စောင့်ကြည့်များအတွက်ဟိုတယ်များ၏ခေါင်မိုးပေါ်ပေါ်ကိုဖန်ဆင်းခဲ့သည်။ သငျသညျခေါင်မိုးပေါ်ကနေ Rath Yatra တွေ့မြင်လိုပါကချောချောမွေ့မွေ့အစောပိုင်းနံနက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်။ (နံနက်စာ packet ကို, ရေပုလင်း, ထုပ်ပိုးနေ့လယ်စာ (veg) သင်ပေးအပ်ပါလိမ့်မည်။ ညနေပိုင်းပြန်ဟိုတယ်၌ဖို့ညစာနှင့်အားမစိုက်ရအိပ်စက်ခြင်းရှိသည်။
နေ့ 4: ရှုခင်းများကြည့်ခြင်း Puri
ဟိုတယ်တွင်နံနက်စာသုံးဆောင်ပြီးနောက်, ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းအဘို့အဆင်သင့်မရ။ Narendra Pokhari, Lokanath ဘုရားကျောင်း, Markandeshwar ဘုရားကျောင်း, Lakshmi ဘုရားကျောင်း, Ganesh ဘုရားကျောင်း, Gundicha ဘုရားကျောင်း, Swargadwar, Raghurajpur အဆိုတော်ကျေးရွာ, Bimala ဘုရားကျောင်း & အများအပြားပိုပြီးသွားရောက်ကြည့်ရှု။ ဟိုတယ်သို့ပြန်သွားသည်နှင့်ညစာစားပွဲနှင့်ကောင်းသောညဥ့်အိပ်စက်မှုရှိသည်။
နေ့ 5: Puri သဲသောင်ပြင်ပျော်စရာ
အစဉ်အလာသန့်စင်သို့ကျဆင်းလာတာကိုရောက်လာပြီသူကိုမရေမတွက်နိုင်သောဘုရားဖူးများအတွက်တစ်ဦးကနေရာ။ ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်၏ခုပ်ရေကိုသူတို့ရဲ့အလှအပကိုးကွယ်ပေးဆောင်ရှိရာအိန္ဒိယအတွက်အကောင်းဆုံးသောငွေရောင်ကမ်းခြေတစ်ခုမှာ။ သင့်အနေဖြင့်ကမ်းခြေများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုင်အေးမြလှိုင်းတံပိုး Ice Cream နှင့်အခြားစားသောက်ကုန်ပစ္စည်းများ၏ပျော်စရာရှိခြင်းကိုခံစားသို့မဟုတ် Puri-Konark အဏ္ဏဝါ Drive ကိုလမ်းတစ်ရှည်လျားသော drive ကိုသွားနိုင်ပါတယ်။
နေ့ 6: Puri မှာဝယ်ရန်
တဦးတည်း Puri န်းကျင်တွေ့ရသောလက်မှုပညာကိုလက်လွတ်လို့မရပါဘူး။ နန်း, ငွေရတနာကိုရှာဖွေလည်း Sambalpuri နှင့် Bomkai Weaver သူတို့ရဲ့အနုစိတ်အလုပ်အတူသင်တို့ dazzle လိမ့်မယ်မဝယ်။
နေ့ 7: Konark မောင်း
အပြင် Ratha Yatra ပွဲတော်တက်ရောက်ခြင်းကနေ Puri အတွက်ခရီးသွားများအတွက်အချို့နဲ့အခြားတန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သောခရီးသွားဧည့်ရွေးချယ်စရာရှာလို့ရပါတယ်။ Puri သဲသောင်ပြင်, Konark သဲသောင်ပြင်, Konark Sun ကဘုရားကျောင်း Puri န်းကျင်အရှိဆုံးစိတ်ဝင်စားဖွယ်ခရီးသွားဆွဲဆောင်မှုတချို့ရှိနေပါတယ်။ Konark Sun ကဘုရားကျောင်း, asi ပြတိုက် (သောကြာနေ့များတွင်ပိတ်သည်), Ramchandi ဘုရားကျောင်း & Chandrabhaga သဲသောင်ပြင်မှနံနက်စာအလည်အပတ်ခရီးပြီးနောက်။ နေ့လည်ခင်းရွှေကမ်းခြေပေါ်လွှတ်ပေးခြင်းနှင့် Puri ၏ကမ်းခြေစျေးကွက်အပေါ်ဖြေလျှော့။ နေ့ချင်းညချင်း Puri မှာ။
နေ့ 8: ထွက်ခွာ
ဆိုက်ရောက်အပေါ် Aarti Tikka
ညစာ & နံနက်စာ
သီးသန့် AC အကားများအားဖြင့်အားလုံးလွှဲပြောင်း
Puri-Konark အဏ္ဏဝါ Drive ကိုအလည်အပတ် (ဇိမ်ခံကားသို့မဟုတ်နည်းပြအတွက်ထိုင်ခုံ)
Puri ရှုခင်းများကြည့်ခြင်းခရီးစဉ် + Jagannath ဗိမာနျတျော + Konark (ဇိမ်ခံကားသို့မဟုတ်နည်းပြအတွက်ထိုင်ခုံ)
သငျသညျသမိုင်းဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း, အထိမ်းအမှတ, ဘေးမဲ့တော, ပွဲတော်များ, ပါဒေသခံယဉ်ကျေးမှုသို့မဟုတ်အစားအစာအကြောင်းပြောဆိုရှိမရှိ - ပြည်နယ်များ၏ကျေးဇူးလုံးဝပွိုငျဘဖြစ်ပါတယ်။ ထိုအခြင်း, Jagannath ယဉ်ကျေးမှုတိုင်းကအိန္ဒိယဂုဏ်ယူစေသည်တစ်ခုခုရှိသည်။
ဘုရားသခင်၏မြေယာမှလှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုပါသည်။ သင့်ရဲ့ဆိုက်ရောက်ဘို့စောင့်ဆိုင်းနေ Odisha ။